Wholesale Masango Bulldozer Vagadziri uye Vatengesi, Fekitori Zvinyorwa | Xuanhua
Tag Archives: Masango Bulldozer
TY230-3 bulldozer iri semi-rigid yakaturikwa, hydraulic kuchinjisa, hydraulic inodzorwa track track bulldozer. Mapuraneti, simba rekuchinja simba rinoitwa Unilever. Iyo yekushandisa sisitimu yakagadzirirwa maererano neyemunhu uye yemuchina mainjiniya inoita kushanda zvirinyore, zvinobudirira uye nemazvo.
T160-3F bulldozer inomira-yakasindimara, yakatwasuka dhiraivha, track-mhando undercarriage, yaishandiswa kuvaka mumugwagwa, kutema matanda mumasango, iine maficha ekuona kwakanaka, kushanda kwakanyanya kushanda, kudhura kwekuchengetedza mutengo.
Iine hunhu hweyakaomeswa-kutomisa kuturika, mekutyaira. Hukuru batira is hydraulic yawedzera. Iine hydraulic mutyairi wendege inodzorwa, kuongorora kwemagetsi, kutaridzika kwakanaka, inoshandiswa zvakanyanya mukuvaka nzira, hydro-magetsi kuvaka, kushandurwa kwemunda, chiteshi uye kusimudzira kwangu uye ...
Iine hunhu hweyakaomeswa-kutomisa kuturika, mekutyaira. Huru batira yakaoma. kuongorora kwemagetsi, kutaridzika kwakanaka, inoshandiswa zvakanyanya mukuvaka nzira, kurima uye kumwe kuvaka.
Semi-rigid yakaturikwa, yakakwidziridzwa sprocket, iyo tier yemagetsi injini, hydrostatic uye inoramba ichishanduka hutachiona, izere simba inowirirana, otomatiki kutonga yakazvimirira inotonhorera system. Injini inodzorwa nemagetsi ine yakazara simba inoenderana pateni, yakaderera kusvibiswa uye kuchengetedza simba.
SD6KLGP bulldozer yakagadzirirwa tira III yemagetsi yekudzivirira injini, hydraulic pombi uye mota, matatu matanho epasi kutenderera kumhanyisa, centralize4d kutonhodza system, yemagetsi chikamu chikamu kudzora uye mutyairi hydraulic kutonga. Iyo SD6KLGP bulldozer ine simba rakasimba ...
SD6K bulldozer yakagadzirirwa tii II injini, hydraulic pombi uye mota, matatu matanho epasi kutapisa kumhanya, centralize4d kutonhodza system, yemagetsi chiyero kudzora kufambisa uye mutyairi hydraulic kutonga. Iyo SD6K bulldozer ine simba rakasimba, zvine hungwaru kuenderana pamwe nemutoro shanduko ..
SD5K ndiyo track-mhando yakazara hydraulic bulldozer ine semi-rigid yakaturikwa, zvemagetsi kudzora tier, maviri-macircuit emagetsi ekudzora hydrostatic kutyaira system, yemagetsi kudzora yakavharwa nzvimbo mutoro kutumira kushandisa hydraulic system.
SD7LGP bulldozer ndeye 230 horsepower track-type dozer ine yakakwidziridzwa sprocket, simba rekuchinja dhiraivha, semi-solid solid yakamiswa uye hydraulic kutonga. SD7LGP-230 horsepower, yakakwidziridzwa sprocket bulldozer inosangana ne modular dhizaini kuri nyore kugadzirisa & kugadzirisa, Iyo inoderedza mafuta nemusiyano kumanikidza ...